March 25, 2019 Beekan Guluma Post in DOM-Diinqa Oromo Media,Oromo [LANGAUGE],TAAJJABBII
Xawalwwaalleefi Torontoo: Torban lama booda JSM biyya galuuf qophaa’aa jira. Mudannoowwan torban lamaan gabaasa siniif dhiyeessa. Isa hardhaarraa yoon jalqabe:
Toronto’tti hardha ijoollee amanamoo jedhaman 7 walitti qabee mariisiseera. Dhimi marii isaa egeree #OMNf akkasumasdhimma jiraachuufi jiraachuu dhisuu jireenya duunfaasaati. Namoota kana waliin iccita gurguddaa mariyate. Iccitiin inni jalqabaa dhimma #Satylaytii OMN dha. Saatilyayitii OMN waggaatti $kuma 120 kaffala. Isa kana qarshii Xoophiyaatiin kaffaluu hindanda’u. Kireedit Kaardii OMN kan Amarikaa jirurraa kaffala. Kanaaf doolaarri akkaauntii kan biyya AMarikaa keessa jiru keessa jiraachuun dirqamadha. Sababaa hinbeekamneen maallaqi inni sochoosu Doolaarri kuma $250 akka inni hinsochoofneef dhorkamee jira. Sababaasaa ammaaf ifa gochuu nan barbaachisu. Waan kana ta’eef gatiin #Saatylaaytii kaffalamaa hinjiru. Yeroonni kaffalu jala muramee itti himamee itti laatameera. Yeroo jedhametti hinkaffalu taanaan #Saatylaytiirra bu’uuf deema. Kanaaf akka fedhe ta’ee biyya alaa kanaati $ kuma 120 argachuun dirqama. Inni kun akka inni yaadetti waan hinataneef fashala’eeraan.
Uummata #Minesota’tiin #OMN deebisee siniif bana jedhee gowwoomsuun gurra muree afaan kaa’ee bira kuteera. Akka inni yaadetti uummatichi waan hingowwoomfamiifiin innis fashala’eera. Kanaaf ammo nama lama jala muree komata. Isaanis, inni jalqabaa #Fua’d Siraj dha. Fuad Siraj Production Management’ dhaabbatichaa ture. Akka JSM amanamtootasaa kanaf ibsetti, Fuad uummata Oromo Harar irratti ijaaree akka isaan maallaqa hintumsine taasiseera. Kanaaf uummata #Harar’n baayyee komata. Namni lammataa inni komatu #Usmaan Ukkumeeti. Uumati #Arsiifi Baalee ariyatamuu Usmaanitti waan mufatee jiruuf, akka inni yaadetti sabichi ba’ee maallaqa hinroobsineef. Kana qofa utuu hintaane, #Feuad’s ta’e Usmaan lamaan isaaniyyuu, bakka maallaqni sun waliti qabamutti nidhufna jedhanii waadaa seenaniifitu, yeroo sa’aatiin ga’u, #Feuad’ bilbila deebisuu didee #Usmaan ammo anoo biyya galeen jiraa jetteen.
Kanaaf, saba Harar fi Arsii irratti akka dura asana maqaa amantiitiin hirkatanii Siyaasa hojjechuufi saamuun baayyee ulfaataadhaa jedhee komataa jira. Amma tokko uummata #Wallaggaatu, nawajjiin dhaabbachuu yaale. Isaanis namoota baayyee durumaanuu natti siqanidha. Jedhe. #Wallaggi waa lamarratti najibbeera. Kan jalqabaa dhimma haadha manaakoo #Arfaaseerrattidha. Inni 2ffaammoo dhimma #WBO iratti jedhe. Gaarummaan Wallaggaa Nama #Wallaggaa hojiirraa ariite jedhee sitti hinmufatu. Amma tokko xiqqooshee yeroo #Abdii Fiixee deeme, ijoolleen narratti duuluu yaaltee turte. Amma garuu sababaa #WBO irraan kan ka’e, hidhata #Baqqalaan nawajjin qaburraaniyyuu #Bekele Gerba’ jibbaniiru. Kanaafuu, maallaqi kun akkuma ta’etti ta’ee $kuma 120 hinfunaanamu taanaan Saatylaaytiin kun cufamuusaati.
Kana booda Abdiinkoo goa Oromoo sadiirra hinjiru. Kana jechuun #Harar, #Arsiifi #Wallagga irratti of gatee socho’uu hinqabu. Kanaaf tarsiimoo keenya jijjiiruu danda’uu qabna. Amamaf #Habashaafi Oromoo gidduu rakkoon jiraachuun maallaqa hanga tokko nuuf argamsiisuu danda’a. garuu itti fufinsa hinqabaatu. Qarshii asii sassaabnu gara biyyaa galchuu hindandeenyu. Qarshii biyya jirus garana fiduu hindandeenyu. Biyya alaa kanatti ji’a ji’aan maallaqi $kuma 12 argamuu hindanda’u taanaan, Waggaatti $kuma 144 funaanuu hindandeenyu taanaan, #OMN egereensaa dukkana. Uummanni #Minesota’ amma tokko miidiyaan isiniif bana jedhee waadaa seeneeraaf. Dhimma kana ilaalchisee nama #Kadiroo Elemoo namni Viidiyoo waraabu tokko torbanitti al lama akka tola nagargaaran waadaa naaf seenaniiru. Uummanni #Arsiifi uummanni #Baalee miidiyaa kanarra taa’ee haasa’uu waan jaallatuuf. Torbanitti callistee nama lamaan tokko haasofsiistee jennaan amma tokko ni arjoomu. Irraa cuftee jennaan garuu duula sirratti banu. Kanaafuu isa kana araarsuurratti nagargaaruu qabduu, salphina keessaa nabaasuu qabdu jedhee watwwaachuun namoota kana walitti qabatee waliin dabarse.
Ji’a 2 booda ammas deebi’een dhufa. Amma ji’a lamaatti maallaqi namoonni waadaa seenaan sassabamee akka akkaauntiitti galee na eegu jechuun namoota 7’n kanaaf ajaja dabarsee , kadhatee, watwwaatee hirbaata affeeranii geggeessani. Gatii geejjiba Xiyayarasaafis walitti buusanii maalaqa arjoomaniiruf. Garuu hafuura gaddaafi cabinsaan adda ba’aniitu #Taajjabbiinis waan funaannattu funaannattee akka Kanaan qindeessatte.
Beekan G. Erena, 03/24/2019